Semtalku wuxuu sharraxayaa Xirfaddaha aad u baahan tahay si aad udheeraato Webka
Haddii aad raadinayso xog si aad u shiddo ganacsigaaga internetka, waxaa dhici karta in suurtogal maaha inaad ururiso macluumaadka si fudud raadinta Google. Mararka qaar waa in aan isticmaalnaa dhowr gawaarida webka iyo waraaqaha xogta si ay u helaan mashaariicdeena, mararka qaarkoodna waa inaan horumarinno xirfadaha aasaasiga ah. Waa run in mashiinnada raadinta kaa caawin karaan inaad heshaan waxa aad raadineysay, laakiin waxaad u baahan tahay inaad horumariso xirfadaha soo socda si aad u guuleysato.
1 - everest poker bonus. Awoodda akhrinta faylka robots.txt
Waa inaad awood u yeelatid inaad akhrido oo aad saxdo faylka robots.txt si sax ah. Faylkan waxaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo kuwa gurguurtan in ay si joogto ah u garaacaan boggaaga. Isla mar ahaantaana, waxay kaa caawineysaa inaad sii wado tayada xogtaada la xoqay oo aad hagaajineyso xawaaraha website-kaaga ee booqdayaasha aadanaha. Taasi waa sababta aad u baraneysid sida loo saxo faylka robots.txt. Markaad faylkaas si habboon u saxeexdid, waxaad awoodi doontaa inaad ka takhalusto bootooyinka xun ee aan u hoggaansanayn xeerarka iyo xeerarka makiinadaha raadinta. Intaa waxaa dheer, waxaad diirada saari kartaa boggaga internetka isla markaana isla markaana xoqin karo ama soo saari karo xogta ku habboon.
2..Abaabul kaabayaasha xogta
Waa mid aad u muhiim ah in la dhiso kaabayaasha xogta maaddaama ay fureyso xogta tayada ee laga helo bogga oo dhan. Tusaale ahaan, waa inaad barataa SQL, PHP, iyo luqado kale oo isku mid ah sida ay kuugu caawiyaan sii wadida kaabayaasha macluumaadkaaga si habboon. Bixinta Isticmaalka Bixinta iyo aasaasida dhismaha xogta waxay awood u siineysaa inaad noqoto falanqeeye is-khilaafsan, oo ku helaya xog sax ah oo aad u fiican oo dhowr daqiiqo gudahood ah.
Waa inaad awood u yeelatid inaad kala geddisid dheelitirka wanaagsan iyo kuwa xun. Goobaha wanaagsani waxay caawiyaan shabakadaada natiijooyinka farsamooyinka raadinta, ku siiya xog fiican oo tayo sare leh. Dhinaca kale, dhuunta xun waxay waxyeello u geysaneysaa goobtaada, waligeedna marnaba ma heli doontid xog aad u fiican. Ma aha oo kaliya inaad ubaahan tahay inaad kala geddisid dheelitirka wanaagsan iyo dhuunta xun, laakiin waa inaad qortaa oo aad kor u qaaddaa qatarta. Waa inaad maskaxda ku haysaa in bots ay yihiin tallaabada xigta ee horumarinta kumbuyuutarka iyo isdhexgalka dadka. Taas macneheedu waa in aad ka ogtahay qatarta oo aad si joogto ah u qori kartaa, kan sare wuxuu noqon doonaa fursadaada inaad xoqdo xogta tayada iyo ka faa'iideysiga ganacsigaaga.